Fantatrao ve ny isan'ny kintana - lahatsoratra
Tena manampy sy matory tokoa ny fihirana rima ao anaty akanin-jaza. Ny vokatra dia vokatr'izany, ankoatry ny zavatra hafa, satria ny ankizy kely dia tia mozika. Ny fandalinana akaiky kokoa ny lohahevitra momba ny torimaso mahasalama dia mampiseho ihany koa fa ny ankizy dia tonga sasatra tsara kokoa amin'ny alàlan'ny mozika.
Fanamarihana sy lahatsoratra Fantatrao ve ny isan'ny kintana
Ny ray aman-dreny dia tsy tokony ho matihanina ihany koa, mba hahitany ny tombony betsaka amin'ny rima garderie ho an'ny torimaso azon'ny taranany. Mba tena marina ny farafaharatsiny farafaharatsiny farafaharatsiny, tongasoa ianao hanonta ny maodelin-tsika ho an'ny ankizy miaraka amin'ny naoty sy an-tsoratra avy amin'ny hiran'ny ankizy. Ny ankizy efa lehibe koa dia afaka miloko amin'ny takelaka misy naoty na soratra! Ny fipihana eo amin'ny sary dia manokatra ny môdely fandokoana miaraka amina naoty sy lahatsoratra amin'ny endrika pdf:
Fantatrao ve ny isan'ny kintana kely misy?
eny amin'ny lanitra manga?
Fantatrao ve hoe firy ny rahona mandeha
manerana an'izao tontolo izao?
Nanisa azy ireo ny Tompo Andriamanitra
fa tsy misy maharatsy azy
amin'ny isa marobe,
amin'ny filentehan'ny masoandro?
Trondro kely firy koa no mampangatsiaka ny tenany
ao anaty rano mamiratra?
Ary ny Tompo Andriamanitra niantso azy ireo tamin'ny anarany,
fa velona daholo izy rehetra
faly izy ireo izao,
fa faly izy ireo izao. Fantatrao ve hoe firy ny zaza aloha?
mifohaza eo am-pandriany
fa tsy miraharaha izy ireo
faly mandritra ny andro?
Andriamanitra any an-danitra dia manana ny zavatra rehetra
ny fahafinaretany, ny fahafinaretany,
mahalala anao koa ary tiako ianao,
mahalala anao koa ary tia anao.
Ny zanabaviko rehetra - naoty na soratra
Ny cuckoo sy ny ampondra - naoty na soratra
Ankehitriny dia miala sasatra ny ala rehetra - naoty na lahatsoratra